Xiaomi dia mampiseho ny smartwatch vaovao amin'ny horonan-tsary ofisialy | Androidsis
Xiaomi dia hanolotra ny smartwatch fotoana fohy. Omaly dia efa naseho ny sary voalohany amin'ity famantaranandron'ny marika sinoa ity, izay hampiasa ny Wear OS ho toy ny rafitra miasa amin'ity tranga ity, farafaharatsiny mba honohono izany. Mianatra tsikelikely momba ity famataranandro ity isika Hanolotra amin'ny fomba ofisialy azy amin'ny 5 Novambra. Ka dia famantaranandro andrasana am-piandrasana fatratra.
Ny famantaranandro dia hamela antsika amin'ny interface vaovao, inona no hatao MIUI ho an'ny Watch. Fandraisana iray izay mikasa ny hampifangaro traikefa amin'ny findainy, izay azo itarina amin'ity tranga ity amin'ny famantaranandro. Fanombohana fahalianana amin'ny raharahan'i Xiaomi.
Tombantombana avy amin'ny Ity famantaranandro ity dia nampiasa ny Wear OS nandritra ny herinandro maro, na dia ao amin'ilay horonan-tsary nakarina aza dia toa tsy dia mazava loatra hoe hampiasa an'io rafitra fiasa io i Xiaomi. Ka tsy maintsy miandry ny famantaranandro omena antsika amin'ny fomba ofisialy isika mba hahafantarantsika bebe kokoa momba izany.
Ny zavatra hitantsika dia afaka ampanjifaina ilay interface. Amin'ny famantaranandro dia afaka mahita takelaka fisoratana anarana isika, izay ahafahantsika mihetsika mitsangana, raha ny bokotra rotary eo amin'ny sisiny kosa dia hanampy antsika amin'ity tranga ity. Azontsika atao koa ny milalao horonantsary amin'ity tranga ity.
Afaka hitantsika izany ity fiambenana Xiaomi ity dia safidy mahaliana amin'ny tsena. Ka azo antoka fa hahalala bebe kokoa isika rehefa mandeha ny andro, ka raisina an-tsaina fa ao anatin'ny herinandro dia haseho amin'ny fomba ofisialy. Tsy mila miandry azy ho ofisialy isika.
Ny zavatra mahazatra dia ity famantaranandro avy amin'ny marika sinoa ity dia halefa any Espana. Fa azo antoka amin'ny fampisehoana an'ity famantaranandro ity dia betsaka no ho fantatra momba ny fandefasana azy iraisam-pirenena. Modely iray hampiakarana Xiaomi ny fisiany eo amin'ny sehatry ny azo anaovana akanjo. Ka ho hitantsika eo izay nomanin'izy ireo ho antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Xiaomi dia mampiseho ny smartwatch amin'ny horonan-tsary
Ity ny Samsung Galaxy XCover FieldPro ho an'ireo izay mitady finday mahatohitra
Rovio dia manaitra ny zava-misy marina momba ny Angry Birds AR: Isle of Pigs